Podcast 9x08: Iyo iPhone X iri pano | IPhone nhau
Imwe svondo isu tinodzoka neiyo Actualidad iPhone podcast, uye zvingaite sei neimwe nzira, vhiki ino protagonist iri iyo iPhone X iyo mumaawa makumi maviri nemana chete ichave iripo kuchengetedza kubva paApple webhusaiti. º ndidzo dzave nyaya dzavepo mukati mevhiki rese. Isu tinokuratidzaiwo mamwe majaja uye mabutiro eiyo iPhone X, uye isu tinopindura mibvunzo yawamutsa pane teregiramu chiteshi. Uri kuzoipotsa here?
Pamusoro penyaya nemafungiro nezve nhau dzevhiki, tichapindurawo mibvunzo kubva kuvateereri vedu. Tichava ne hashtag #podcastapple inoshanda mukati mevhiki rese paTwitter kuti iwe ugone kutibvunza zvaunoda, tiite mazano kana chero zvinouya mupfungwa. Kukahadzika, dzidziso, maonero uye kuongorora kweanoshandisa, chero chinhu chine nzvimbo muchikamu chino chinotora chikamu chekupedzisira chedu podcast uye chatinoda kuti utibatsire kuita vhiki rega rega.
Semamwe mwaka, gore rino iyo Actualidad iPhone podcast inogona zvakare kuteverwa mhenyu kuburikidza yedu YouTube chiteshi uye tora chikamu mairi kuburikidza nhaurirano neboka rePodcast nevamwe vanoona. Nyorera kuchiteshi chedu kuti ugamuchire zviziviso zve painotanga iko kurekodha kwepodcast, uyezve patinowedzera mamwe mavhidhiyo atinoparidzira mairi. Ehe icharamba ichiwanikwa mu iTunes saka unogona kuiteerera pese paunoda kushandisa chaunofarira Podcast application. Tinokurudzira kuti unyore kuTunes kuitira kuti zvikamu zvikwanise kurodha pasi zvoga kana zvangowanikwa. Iwe unoda kuinzwa iko pano? Zvakanaka pazasi pane iwe une mutambi kuti azviite. Isu zvakare tine playlist muApple Music nemumhanzi unorira mupodcast.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Podcast » Podcast 9 × 08: Iyo iPhone X iri pano
Zvekutanga zvemukati zvakarongwa naApple hazvizofambisirwa zvakanangana neApple Music
FIFA 18 Companion inovandudzwa nezvimwe zvakawanda zvitsva